Wikipedia:Maqaalkaadii koowaad - Wikipedia
Al-mahra waxay ku taala koonfurta jasiirada carabta, bariga saldanada Cumaan, galbeedka Hadarmuut, waqooyiga al-rubci al-khaali sacuudi carabiya iyo koonfurta badda carabta.
xuduudeeda wuxuu ka biloowda qabrigii nabi Huud caleyhi salaam oo u dhaw magaalada shixir oo ku taala xeebta badweynta al-hindiya, halkaas waxaa ku yaala jasiirado badan oo ay ka mid tahay jasiirad Suqadara oo ahaan jirtay xarunta Suldaanka al-mahra.
Dhulka maherigu wuxuu lee yahay taariikh muhiim ah dhanka juraafika, dhaqaalaha (khayraadka badda, beeraha ) iyo xagga xiriirka ganacsiga.
Waxaa lagu qadara tirada dadka ¾ Malyuun, waxaa dibedda ugu haajiray tiro lagu qiyaaso 30%, kuwaas oo u haajiray wadamada carabta ee jaarka la ah sida Kuwait, Cumaan, Imaaraadka carabta, Sacuudiga, Hindiya iyo bariga Africa (soomaaliya, Kenya iyo Ugaandha).
Dadka meherigu wuxuu u qaybsan yahay saddex qaybood oo kala ah:
Waxay dadka baadiyaha dhaqdaan xoolaha kala duwan sida geela, ariga, lo’da, xoolahaas oo ay siyaabo badan uga faa’iidaystaan dhaqashadooda iyo ka munaafacooda. Dhulka mahra waxuu lee yahay durduro iyo ilo biyuhu ka yimaadaan, waxaa kale oo ay laga helaa ceelal badan oo dadka iyo xooluhuba isticmaalaan.
waxay beertaan noocyada kala duwan ee cunta daruuriga ah, qudaarta iyo faruudka. Waxaa kale oo dhulka meherigu hodan ku yahay beeraha timirta noocyadood kala duwan, taasuu laga isticmaalo gudaha iyo dibeddaba, waxaa kale oo ay hodan ku yihiin maydinka, beeyada (luubaan).
Dhulka mahra wuxuu hodan ku yahay khayraadka kaluumaysiga, kalluumaysigu waa halbowlaha nolasha dadka reer mahra. Waxay lee yihiin xirfad iyo aqoon dheeraad ah, sidoo kale waxay caan ku yihiin aqoonta cilmiga loo yaqaan cilmi falaga iyo adeegsashada gaadiidka badda (doonyaha). Isticmaalida badda waxaay ahmiyad weyn u lee dahay bulshada meheriga waxaana sanad walba ka soo gala dhaqaalo fara badan khayraad badda.
Dhaqanka iyo cadaadka:
Dadka meherigu waxay lee yihiin dhaqan iyo caado u gaar ah, waxaa kale oo ay ku amaanan yihiin amaanada, runta iyo karaamada dadka. Waxaalaha amaanta ah ee ay caanka ku yihiin waxaa ka mid dadka safarka ah oo aan wax saad ah qaadan marka ay yimaadaan dhulka mehra, masjidyada mahra wuxuu lee yahay qol lagu talagalay dadka socotada ah, halkaas oo intii joogo qofku seexanaayo cuntadiisana uu helaayo inta uu joogo halkaas.
Dhulka mahra ma lahayn wax iskuulo rasmi ah, waxaa ka jiray iskuulo quraanka lagu dhigo oo kaliya.
1955 ayaa suldaanka almahra aaday xajka, wuxuu qoraal codsi ah qoray boqorka sacuudiga boqor al sacuud, nasiib daro wax uga hirgalay ma aysan jirin wax dabagal ah oo lagu sameeyay codsigaasna ma jirin. Dhulka almahra wuxuu ahaa dhul ka go’doonsan dunida mana lahayn wax horumar ah, waxaa laga ilaalin jiray in ayna soo gaarin joornaalda, wafooda aqoonta leh iyo wixii horumar keeni kara. Intaas waxaa u sii dheer baaritaan lagu sameeyo doonyaha ganacsiga ee imaanaya dhulka almahra, cidii loo arko in aysan ahayn meheri dib loogu celiyo meeshii ay ka yimaadeen.
Siyaasadihii ingiriisku ee Meheriga:
Siyaasadihii ingiriisku waxay ahaan jireen kuwo ku salaysan gumeeysi xiliyadaas, waxay had iyo jeer isku day jireen in ay dhulka mahra ka go’doomiyaan dunida iyagoo ka jari-jiray dhammaan isgaarsiinta khadadka taleefoonada iyo wixii kale oo loo isticmaalo isgaarsiin.
Markuu sanadku ahaa 1960kii ayaa wafdi ka socda dalka Kuwait isku dayeen in ay booqasho ku yimaadaan Mukula caasimada Hadarmuut si ay u soo indha-indheeyaan xaalada kuufur carbeed oo ay gumeeysan jireen ingiriisku, nasiib daro ergaygii ingiriisku ugu qaabilsana halkaas ayaa diiday in wafdigii ka socday dawlada Kuwait halkaas soo gaaraan ka dibna dib ugu celiyay meeshii ay ka yimaadeen iyagoo loo diiday in ay garaan dhulka almahra iyo baadiyaha Hadarmuut. Wafood badan ayaa isku dayay in ay soo garaan dhulka meheriga si ay ugu guur galaan xalada dhabta ah ee ka jirta dhulka, nasiib dar maysan dhacin in loo ogolaado in ay yimaadaan dhulka mahra taasoo lagala diriraayay in ay soo gaarto ilbaxnimada iyo aqoonta.
Sanadku markuu ahaa 1965 ayaa wasiir ka mid saldanada almahra u qoray qoraal rasmi ah dawlada Kuwait iyagoo ka dalbaday kaalmo, nasiib daro dawlada Kuwait way ku guul dareysatay in ay soo gaaraan dhulka mahra si ay ugu kuur galaan xaladaha ka jira halkaas, Dawlada ingiriisku ayaa xoog saartay in aan dhulka meheriga laga soo galin bariga iyo galbeedka badda kana ilaali naysay in ay soo gaaraan kaalmo dibedda uga timaada. Waxaa kale oo dowlada ingiriisku u diideen in ay soo gaaraan wax joornaalo ah iyo aqoon yahano. Sidoo kale wafdi ka socda dalka Lubnaan oo uu hogaaminaayey Saliim Zubal ayaa isku dayay in ay soo garaan dhulka mahra si ay u soo indha-indheeyaan xaaladaha xun ee ka jirta halkaas, markii ay soo gaareen magaalada Mascut ee dalka cumaan ayaa dib loogu celiyay dalka Baxreen.
Waxaa soo kordhaayay dadka doonaya in ay soo gaaraan dhulka almahra si ay u soo indha-indheeyaan xaalada dhabta ah ee ka jirta halkaas. biloowgii kacdoonkii kacaank uu hogaaminaayay Jamaal cabdi naasir, dawlada ingiriiisaku waxay biloowday in ay xeebaha almahra kormeeraan si ay uga ilaaliyaan waxa ka Soo gala dhulka iyagoo koontaroolaya xeebta badda carbeed iyo khaliija isla markaasna fatashaya dhammaan doonyaha ganacsiga ee imaanaya dhulka mahra, sidoo kale waxaa la fatashayaa dhammaan dadka la socda doonyahaas iyadoo la doonaayo in la aqoonsado qof kasta oo imaanaya halkaas, cida loo aqoonsado in aysan ahayn dadka meheriga waxaa dib loogu celinayay Mascut si loogu sameeyo baaritaan dhab ah ka dibna maxkamad la hor keeno.
Nadaamka Xukumada Suldada al-mahra:
Nadaamka Xukumada meheriga waxay ahayd mid ku saleysan nidaam boqortooyo dhaxal ah, boqortooyada ayaa ahayd mid qoys ku saleysan. Boqortooyada almeheri waxay ka soo jeeday boqortooyadii Alximyar ee xukumi jirtay dhulka almahra, taasoo la hayd af u gaar ah oo fac-weyn, waxaana ka jirtay dhulka dawlad aad u fac weyn inkastoo aysan jirin wax horumar iyo ilbaxnimo muuqata xiligaas, xukumada meheri waxaa loo wareejiyay Jasiirada Suqadara, oo ahayd xarunta suldaanka almahra, waxaana xiligaas suldaan u ahaa salaadiintii alcafrar oo ahaa salaadiinta aad iyo aad looga tixgaliyo loogana xurmeeyo dhulka almahra, waxaa suldada ka ahaa suldaan Alducari. Salaadiinta kale oo halkaas laga tixgalin jiray waxaa ka mid suldaan Salim bin Durari, cabdullaahi Salim, Axmed bin Cabdullaahi, Cise bin Cali Cabdullaahi bin cafraar. Suldaanka ayaa sanadkii hal bal ah aadi jiray dhulka meheri, bishaas oo ahayd bisha muxaram, halkaas oo wixii khilaafaad iyo dhibaatooyin ah, bishaas oo loogu magac daray bishii masiirak bulshada mahra, waxaa halkaas iskugu imaan jiray mashaayiikhda iyo sharci yaqaanada almahra si ay u soo dhaweeyaan suldaanka, soo dhaweynta ayaa lagu qaban jiray magaalada qishin (Qishn) oo ahaan jirtay xarunta baarlamaanka almahra.
Sanadadii kuntammeeyadii iyo laxdammeeyadii, waxaa laga qaadan jiray dhulka almahra passabooro ay bixiso Saldanada almahra taasoo hoos imaan jirtay maxmiyadii bari ee ingiriiska. Waxaa xukumi jiray suldaan abu shawarib, ka dibna suldaan axmed bin cabdullah bin cafrar.
Dhamaadkii sanadkii 1967 waxaa bilowday kacaankii koofurta yemen ee cadan, halkaas oo ay xuriyadoodii ku heleen, waxaa lagu dhisay dawladii loogu magacaabi jiray dawlad koofurta shacabka dimoqraadiga yemen, mudo ka dib ayaa saldanada almahra ku soo biirtay koofurta yemen
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Maqaalkaadii_koowaad&oldid=188361"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 21 Diseembar 2018, marka ee eheed 13:02.